होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमित के-के गर्ने ?- डा. रवीन्द्र पाण्डे || विचार
काठमाडौं । कोभिड-१९ को संक्रमण भयावह रूपमा फैलिइरहेको छ । यसपटकको नयाँ प्रजातिको महामारी गतसालको जस्तो सामान्य छैन ।
ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, स्वाद र गन्ध हराउने, पखाला वा र बान्ता हुने, एकदम थकान हुने लगायतको लक्षण देखा परिरहेको छ ।
समुदायमा संक्रमण फैलिइसकेको अहिलेको स्थितिमा बिरामीले अस्पतालमा झट्ट भर्ना पाउन समेत मुस्किल हुन थालेको छ ।
यो बेला अधिकांश संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा छन् । त्यसरी होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितका लागि जनस्वास्थ्यविद् डा. रविन्द्र पाण्डेले केही महत्वपूर्ण सल्लाह दिएका छन् ।
४. अक्सिजनको मात्रा ९४ भन्दा कम भएमा, ज्वरो आइरहेमा वा खोकी लागिरहेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा वा अन्य गाह्रो भएमा घरमा नबस्नुहोला । यो नयाँ भेरिएन्टले अचानक कोभिड निमोनिया गराउँछ ।
तसर्थ नजिकको कोभिड अस्पतालमा गएर चिकित्सकसँग जाँच गराउनुहोला । छातीको एक्स रे वा सीटी स्क्यान गरेर फोक्सोको अवस्था अनुसार चिकित्सकको सिफारिसमा औषधि (एन्टिभाइरल/एन्टिबायोटिक) खानुपर्ने हुन्छ । कोभिड निमोनिया भएमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ ।